Wednesday November 18, 2020 - 17:49:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
gobolka Tigray waxaa ka socda dagaal culus
Boqolaal askar iyo saraakiil Xabashi ah balse kasoo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa lagu xiray gudaha dalka Soomaaliya.
Wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa faafisay warbixin ay ku xaqiijinayso in saldhigyo ay ciidamada Itoobiya ku leeyihiin Soomaaliya lagu xiray 200 ilaa 300 oo askari Tigree ah.
Ciidamadan ayaa hub ka dhigis lagu sameeyay kadibna iyagoo jeebaysan ayaa Konteenarro lagu xiray, saraakiisha laxiray waxaa kamid ah taliye ku xigeenkii ciidamada Itoobiya ee gobollada Bay,Bakool iyo Gedo.
Warbixintu waxay sheegaysaa in ciidamada Itoobiya ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya uu saameyn xun ku reebay dagaalka ahliga ah ee ka dhax qarxay TPLF iyo melleteriga Itoobiya oo ubadan qowmiyadda Xabashida.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dowladda Itoobiya ay kumanaan katirsan ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya ay labaxday ayna udaad guraysay dhanka jiidda dagaalka ee gobolka Tigray.